Tratry ny fialantsasatra avy amin'i Janma Gene!
Fotoana fandefasana: 12-25-2020
Ny taona 2020 dia taona tsy mahazatra iray, anjakan'ny fanamby vaovao sy tsy fahatokisana lehibe. Ny fifehezana, ny fanajana ny hafa ary ny fiaraha-miasa dia zava-dehibe kokoa tamin'ity taona ity noho ny teo aloha. Miaraka amin'ny fanoloran-tena miavaka ataon'ireo mpiasan'ny Janma Gene, notazoninay tsy tapaka ny asanay ary ...Hamaky bebe kokoa »
Vita tao anatin'ny 40 minitra ny fitsapana ny asidra niokrika!
Ny "Janma gene" dia manana sehatra teknolojika fikarohana asidra nukôlika miavaka roa (sehatra fidirana asidra niokleary isothermal, sehatra fitadiavana asidra nioknaika ASEA), ny vokatra novolavolaina tamin'ny alàlan'ity sehatra ity dia tsotra, haingana, tena voafaritra tsara, fahatsapana avo sy toetra hafa ...Hamaky bebe kokoa »
Amidy be ny fantsom-pamantarana virosy azo alain-jaza JanMa Gene!
Fotoana fandefasana: 12-08-2020
Ny ankamaroan'ny vahaolana fitehirizana ny viriosy mahazatra dia misy sira guanidine (guanidine isothiocyanate na guanidine hydrochloride), izay denaturantan'ny proteinina mahazatra ho an'ny lysis sela mandritra ny fitrandrahana asidra niokleary, ary koa afaka mampihena ny viriosy. Na izany aza, ny rafi-sira guanidine dia tsy afaka p ...Hamaky bebe kokoa »
Ny zavamaneno PCR fluorescent (ND360) namorona ny "JanMa gen" dia nahazo mari-pahaizana CE!
Fotoana fandefasana: 12-03-2020
Vao tsy ela akory izay, ny fitaovana PCR be fatra (ND360) novokarin'ny "Gen JanMa" dia nahazo mari-pahaizana CE, izay manamarika fa ny rafitry ny asidra nokleika ao amin'ny gen JanMa dia neken'ny firenena mandroso any Eropa ary nahazo ny mari-pahaizana momba ny varotra any ivelany. Hatramin'ny Outbr ...Hamaky bebe kokoa »
Qingdao Jianma Gene Technology Co., Ltd. vokatra ara-pitsaboana voalohany 2020CACLP, vokatra andrana asidra nokleika maro ny fisehoana mahavariana!
Fotoana fandefasana: 11-13-2020
Nanomboka tamin'ny 21 ka hatramin'ny 23 Aogositra lasa teo, tao amin'ny Ivontoerana Expo Iraisampirenena Nanchang Greenland, CACLP, ilay 17ème international Laboratory Medicine and Blood Transfusion Instrument and Reagent Fair. Orinasa 1006 avy amin'ny sehatry ny indostria diagnostika in vitro (IN vi ...Hamaky bebe kokoa »
Ny fikarohana asidra niokleary an'ny coronavirus vaovao an'ny Qingdao Jianma Gene Technology Co., Ltd. dia voamarina tamin'ny taona CE.
Ny fikarohana asidra niokleary an'ny coronavirus vaovao an'ny Qingdao Jianma Gene Technology Co., Ltd. dia voamarina tamin'ny taona CE. Tamin'ny faha-13 martsa, ny kitapom-pitsapana asidra nukoma COVID (fomba fluorescence Rapid PCR) an'ny Qingdao Jianma Gene Technology Co., Ltd., sampana iray an'ny Qingd ...Hamaky bebe kokoa »
© Copyright - 2010-2020: Voatahiry ny Zo rehetra. Canine Parvovirus (Cp), Kitapo fitrandrahana asidra niokleary haingana, Kitapo tsy misy fitrandrahana, Kitapo fitsapana haingana an'i China,